ကားလိုး ကော်လိုဒီ - ဝီကီပီးဒီးယား
(1826-11-24)၂၄ နိုဝင်ဘာ၊ ၁၈၂၆
၂၆ အောက်တိုဘာ၊ ၁၈၉၀(1890-10-26) (အသက် ၆၃)
ကားလိုး လော်ရင်ဇီနီကို သူ၏ကလောင်နာမည်ဖြစ်သော ကားလိုး ကော်လိုဒီ (Carlo Collodi) အမည်ဖြင့် လူသိများသည်။ ၁၈၂၆ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ၂၄၇က်နေ့ တွင် အီတလီနိုင်ငံ၊ ဖလော်ရင့်စ်မြို့တွင် မွေးဖွားသည်။ အီတလီကလေးစာပေ စာရေးဆရာတစ်ဦး ဖြစ်သည်။ သူ၏ထင်ရှားသော ကမ္ဘာကျော်စာအုပ်မှာ နတ်သမီး ပုံဝတ္တုရှည်ဖြစ်သော ပင်နော့ချီယို၏ စွန့်စားခန်းများ စာအုပ်ဖြစ်သည်။
၁၈၄၈ခုနှစ်မှ ၁၈၆၀ပြည့်နှစ်အကြား ဖြစ်ပွားသော အီတလီလွတ်မြောက်ရေးစစ်ပွဲကာလအတွင်း ကော်လို ဒီသည် စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖြစ် တပ်စကန်စစ်တပ်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ နိုင်ငံရေးဖြစ်ရပ်များတွင် သူ၏စိတ်ပါ ဝင်စားမှုကို သူ၏အစောပိုင်းရေးသားသောစာများတွင် တွေ့နိုင်လေသည်။ သူသည် သရော်စာများဖော်ပြသော သတင်းစာ တစ်စောင်ကိုလည်း ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ သို့သော် ယင်းသတင်းစာသည် ၁၈၄၉ခုနှစ်တွင် တပ်စကန်နီနယ်စားကြီး၏ အမိန့် ဖြင့် ပိတ်ပင်ခြင်းခံရသည်။ သို့သော်လည်း ၁၈၆၀ပြည့်နှစ်၊ မေလတွင် ပြန်လည်ထွက်ပေါ်လာသည်။
လော်ရင်ဇီနီသည် ၁၈၅၆ခုနှစ်တွင် သူ၏ဝတ္တုရှည် In vapore နှင့် အောင်မြင်မှုကိုရရှိလေသည်။ယင်းနောက် အခြားသော နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ သတင်းစာများတွင်လည်း ပါဝင်လာသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် သူသည် ဇာတ်ခုံဆိုင်ရာဆင်ဆာကော် မရှင်တွင်လည်း ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်လေသည်။ ယင်းကာလအတွင်း သူသည် သရော်စာများစွာကို ရေးသားခဲ့သည်။
၁၈၇၅ခုနှစ်တွင် သူသည် ကလေးစာပေလောကသို့ ဝင်ရောက်လာသည်။ ချားလ်ပဲရော့လ်ဒ်၏ ပြင်သစ်နတ်သမီးပုံပြင် များကို ဘာသာပြန်ထားသည့် ရက်ကွန်တီ ဒဲလ်ဖိတ်ကို ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ၁၈၇၆ခုနှစ်တွင် ဂျီအန်နတ်တီနိုကို ရေး သားခဲ့သည်။ ယင်းမှာ အလက်ဇန်းဒရိုးလ် လူအီဂီ ပယ်ရာဗီချီနီ၏ ဂျီအန်နတ်တိုကို မှီငြမ်းကာ ရေးသားထားခြင်း ဖြစ် သည်။ ဂျီအန်နတ်တီနိုနှင့် ယင်း၏နောက်ဆက်တွဲစာအုပ်များသည် အီတလီပြည်ပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေးအတွက် ဇာတ် ကောင် ဂျီအန်နတ်တီနို၏ စိတ်ကူးများ၊ လှုပ်ရှားမှုများအကြောင်း ဖြစ်သည်။
လော်ရင်ဇီနီသည် ၁၈၈၀ပြည့်နှစ်တွင် လက်ထိုးရုပ်သေးရုပ်ကလေးတစ်ရုပ်၏ ဇာတ်လမ်းအမည်ရှိပုံဝတ္တုကို ကလေး များအတွက် အပတ်စဉ်ထုတ်ဝေသည့် ပထမဆုံးအီတလီကလေးသတင်းစာတွင် ရေးသားခဲ့သည်။ ယင်းပုံဝတ္တုကို ပင်နော့ချီယို၏စွန့်စားခန်းများဟုလည်း လူသိများသည်။
လော်ရင်ဇီနီသည် ၁၈၉၀ပြည့်နှစ်တွင် ဖလော်ရင့်စ်မြို့၌ ကွယ်လွန်သည်။ သူဖန်တီးခဲ့သည့် အနု ပညာများမှ ပေါ်ပေါက်လာမည့်ကျော်ကြားမှုနှင့် လူကြိုက်များမှုများကို ဂရုမမူနိုင်တော့ပေ။ ပင်နော့ချီယိုသည် စာရေး ဆရာနှင့်မသက်ဆိုင်ဘဲ သီးခြား အောင်မြင်သွားခဲ့သည်။
↑ Jack Zines. «Introduction». In: Carlo Collordi. Pinnochio. Penguin Books 2002. ISBN 0-14-243706-9
↑ Gaetana Marrone; Paolo Puppa (26 December 2006). Encyclopedia of Italian Literary Studies. Routledge. pp. 485–. ISBN 978-1-135-45530-9.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ကားလိုး_ကော်လိုဒီ&oldid=500312" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၀ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၀၊ ၁၈:၅၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။